Naqshad - Guangzhou Airwoods Deegaanka Teknolojiyadda Co., Ltd.
Macaamiisha Koowaad / Ujeedka Dadka / Daacadnimada / Ku raaxayso Shaqada / Dabagalka Isbeddelka, Sii Socota
Cusbooneysiin / Qiimo Wadaag / Horaantii, Si dhakhso badan, Xirfad badan
Airwoods waxay leedahay in kabadan 10 sano oo waayo aragnimo balaaran ah qaboojinta dibada iyo qolka nadiifinta howlaha mashruuca injineernimada, waxayna leedahay koox adeega mashruuca leh khibrad balaaran. Marka loo eego astaamaha iyo horumarka dhabta ah ee mashruuc kasta, waxaan ku siin karnaa adeegyo la-talin qaab-heer sare ah. (badanaa loo qaybiyay naqshad fikradeed, naqshad hordhac ah, naqshad faahfaahsan iyo marxaladaha naqshadeynta dhismaha), Iyo Bixinta adeegyo naqshadeyn kala duwan ah oo loogu talagalay macaamiisha (sida adeegyada la-talinta iyo soo-jeedinta, qaabeynta xulashada qalabka qaboojiyaha, naqshadeynta guud ee mashruuca, naqshadaynta naqshadeynta asalka ah, iwm .)
1. Marxaladda Naqshadeynta:
(1) naqshad fikradeed: u soo bandhig xoogaa talo bixin ah iyo sawiro naqshad fikradeed oo macaamilka loogu talagalay marxaladda qorshaynta mashruuca, iyo in lagu bixiyo kharash lagu qiyaasay mashruuca.
(2) Naqshad horudhac ah: marxaladda bilowga mashruuca, macaamilkuna leeyahay sawirro qorshayn oo hordhac ah, waxaan ku siin karnaa sawirrada HVAC naqshadeynta hordhaca ah ee macaamiisha.
(3) Naqshad faahfaahsan: marxaladda hirgelinta ee mashruuca, waxay ku dhowdahay inay gasho marxaladda wax soo iibsiga, waxaan siin karnaa macaamilka sawirro naqshadaysan oo HVAC ah, iyo bixinta aasaaska qandaraaska u dhexeeya macaamilka iyo annaga, sidoo kale mustaqbalka hirgelinta mashruuca.
(4) Naqshadeynta sawirka dhismaha: marxaladda dhismaha ee mashruuca, waxaan ku bixin doonnaa sawirro HVAC oo faahfaahsan sida ku cad natiijooyinka sahanka goobta.
(1) adeegyo latalin iyo talo bixin bilaash ah
(2) waxay bixisaa xisaabinta cabirida cabbirka qaboojiyaha oo bilaash ah, xaqiijin iyo naqshadeynta xulashada cutubka qaboojiyaha oo faahfaahsan, waxayna siisaa sawirro cutubyo qaboojiye oo faahfaahsan.
(3) waxay bixiyaan sawirro naqshad xirfadeed (oo ay kujiraan qurxinta, qaboojiyaha, korantada iyo anshaxyada kale) ee loogu talagalay mashruuca guud ee qaboojinta iyo mashruuca qolka nadiifka ah. Hadday tahay in la dallacayo iyo in kale, labada dhinacba waxay u baahan yihiin inay wada xiriiraan. Dabcan, kharashku waa mid aad u hooseeya oo astaan ​​ah. Haddii labada dhinacba saxeexaan qandaraaska qandaraaska guud ee soo iibsiga, qaybtan ka mid ah naqshadeynta iyo kharashka la-tashiga waxaa laga goyn karaa qandaraaska qandaraaska mashruuca guud.
(4) waxay siisaa adeegyo isku-habboonaynta sawirada mashaariicda sawir-gacmeedka hordhaca ah ee hadda jira. Hadday tahay in la dallacayo iyo in kale, labada dhinacba waxay u baahan yihiin inay wada xiriiraan. Dabcan, kharashku waa mid aad u hooseeya oo astaan ​​ah. Haddii labada dhinacba ay wada saxiixaan qandaraaska qandaraaska wax soo iibsiga guud, qaybtaan ka mid ah kharashka la talinta qaabeynta waxaa laga goyn karaa qandaraaska qandaraaska mashruuca guud.